I-Texas ivala indawo yokuwela umda ukuze iyeke ukufuduka kwabafuduki
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » I-Texas ivala indawo yokuwela umda ukuze iyeke ukufuduka kwabafuduki
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
KwiBhulorho yaMazwe ngaMazwe eDel Rio, eTexas, ngaphezulu kwama-8,000 abafuduki abalekele e-US kwaye ngoku balinde ukubanjwa yi-US Border Patrol.
Amasiko aseMelika kunye noKhuselo lweMida lubhengeze izolo ukuba iiarhente zakhe zidibene nabantu abangama-208,887 abafuduka ngokungekho mthethweni ngo-Agasti, ukonyuka okungaphezulu kwama-300% ukusukela ngo-Agasti 2020. Rhoqo ngenyanga kulo nyaka ukuza kuthi ga ngoku kubonwe inani leentlanganiso ngokuthelekiswa neenyanga ezifanayo ngo-2020, 2019 no I-2018, kunye ne-1.1 yezigidi zabantu bawele ngokungekho mthethweni umda kwi-2021 ukuza kuthi ga ngoku.
Irhuluneli yaseTexas iyalela ukuba kuvalwe yonke imida yokunqanda umda wabantu abafudukela ngokungekho mthethweni kwilizwe.
UAbbott uxele ukuba, ngokungafaniyo noMongameli Biden, uMbuso waseTexas uhlala ezinikele ekukhuseleni imida yethu kunye nokukhusela abantu baseMelika.
IRhuluneli yaseTexas, uGreg Abbott, ukhuphe ingxelo namhlanje evakalisa ukuvalwa kweendawo ezintandathu zokuwela umda, "ukunqanda ezi kharaveni (zingekho mthethweni) ukuba zongamele ilizwe lethu."
Irhuluneli yaseTexas uGreg Abbott
"Ukungakhathali okupheleleyo kolawulo lweBiden ukwenza umsebenzi wabo nokukhusela umda kuyothusa," utshilo u-Abbott, iRiphabhlikhi kwingxelo.
"Ngokungafaniyo noMongameli Biden, uRhulumente waseTexas uhlala ezinikele ekukhuseleni umda wethu nokukhusela abantu baseMelika."
"Ndiyalele iSebe lezoKhuseleko loLuntu kunye neTexas National Guard ukuba inyuse abasebenzi kunye nezithuthi ukuba zivale iingongoma ezintandathu zokungena kumda osemazantsi ukunqanda ezi kharaveni zisongamela ilizwe lethu."
Kwi-International Bridge eDel Rio, eTexas, ngaphezu kwama-8,000 abafuduki bawelele e-US kwaye ngoku balinde ukubanjwa ngu Umda wokujikeleza kweMelika amagosa, ngokweengxelo zangoLwesine.
Isihlwele saphindaphindeka ngobukhulu ukusuka kwi-4,000 ukuya kwi-8,000 ukusukela ngoLwesithathu, ngomthombo wokunyanzeliswa komthetho usithi uninzi lwabantu baseHaiti.
Isikali sesi sihlwele, kuye kwathiwa sigubungele iBorder Patrol, ethi, ngokuka-Abbott, yacela uMbuso waseTexas ukuba ungenelele uvale ukunqumla.
IDel Rio yenye yezinto ezintathu ezinqumlayo kumda weTexas neMexico.
Abafuduki abafika kwezi nqamlezo banokubanga indawo yokhuseleko okanye baziveze kwiBorder Patrol ukuba babanjwe emva koko bakhululwe baye e-US, ngeli xesha lika-Obama 'lokubamba nokukhulula' umgaqo-nkqubo obuyiselwe nguMongameli uJoe Biden ekuqaleni kwalo nyaka.
Ukongeza, ulawulo lweBiden lurhoxisile ngexilongoHlalani kumgaqo-nkqubo waseMexico, owawufuna ukuba bonke abantu abangenayo ukuba benze indawo yabo yokukhosela okanye yokungena eMexico kwaye balinde apho de kube kusetyenzwa la mabango.
UBiden uguqule kwakhona ngexilongoUmgaqo-nkqubo wokubuyisa umva bonke abanqumlayo ngexesha le-COVID-19 bhubhane, kuveza okwahlukileyo kwabangaphantsi kwe-18s, kukhokelela kunyuko lwabantwana abangahambelaniyo bethatha uhambo ukusuka eCentral America ukuya e-US.
Nangona kunjalo, ngokweNkcubeko kunye nedatha yoKhuselo lweMida, uninzi lwabantu abanqumlayo kwimida ngo-2021 ngabantu abadala abangatshatanga.
Amasiko aseMelika kunye noKhuseleko lweMida ibhengeze izolo ukuba iiarhente zayo zidibene nabaphambukeli abangama-208,887 ngokungekho mthethweni ngo-Agasti, ukonyuka okungaphezulu kwama-300% ukusukela ngo-Agasti 2020. Nyanga nganye kulo nyaka ukuza kuthi ga ngoku kuye kwabona inani leentlanganiso xa kuthelekiswa neenyanga ezifanayo ngo-2020, 2019 no-2018, kunye nesigidi esiyi-1.1 abantu bawele ngokungekho mthethweni umda ngo-2021 ukuza kuthi ga ngoku.
Kungekudala emva kokubhengezwa kwakhe, iRhuluneli u-Abbott wakhupha enye ingxelo esithi ulawulo lwe-Biden luyalele ukuba ukuwela kwe-Texas kuhlale kuvulekile.
UAbbott uthe iSebe lezoKhuseleko loLuntu kunye nabasebenzi boGada kuZwelonke nangona kunjalo baya kuhlala kwindawo yokunqanda ukuwela.